တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကို ကွန်တိန်နာ စနစ်သစ်ဖြင့် တရုတ်ဘက်မှ အစမ်းသဘော ပြန်လည်စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးမည် -🔥 - Myanmar Myinkwin Zone
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကို ကွန်တိန်နာ စနစ်သစ်ဖြင့် တရုတ်ဘက်မှ အစမ်းသဘော ပြန်လည်စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးမည် -🔥
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းဖြစ်တဲ့ ကျင်ဆန်းကျော့ဂိတ်ကို အချိန် ၅ လနီးပါး ပိတ်ခဲ့ရာက လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်မှာ ကွန်တိန်နာစနစ်သစ်နဲ့ ပြန်လည် စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ဖို့ နှစ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးဌာနတွေ သဘောတူလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ မူဆယ်အခြေစိုက် မြန်မာကုန်သည်တွေက ဒီဗွီဘီကိုပြောပါတယ်။….
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါတတိယလှိုင်းကို အကြောင်းပြပြီး နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းတွေတည်ရှိရာ ကျင်ဆန်းကျော့ဂိတ်၊ ဝမ်တိန်ဂိတ်၊ ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်တွေမှာ လာရောက်ကုန်သွယ်မှုမပြုဖို့ တရုတ်အစိုးရက ပြီးခဲတဲ့ ဇူလိုင် ၄ ရက်ကစပြီးတော့ ကန့်သတ်လိုက်တာပါ။…
ဒါကြောင့် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးက အချိန်အားဖြင့် ၅ လနီးပါး ရပ်တန့်ခဲ့ရပြီး နှစ်ဖက်ကုန်စီးဆင်းမှုအပေါ် ထိခိုက်မှုရှိတာကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ရှိသူတွေ အပါအဝင် ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်တို့က နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။…
အဆိုပါအစည်းအဝေးအား ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မူဆယ်ကုန်စည်ဒိုင်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက “အစည်း အဝေးရဲ့ရလဒ်ကတော့ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကွန်တိန်နာကား ၅ စီးနဲ့ မြန်မာပြည်ကနေ တရုတ်ပြည်ဆီသွားမယ်။ တရုတ်ပြည်ကလည်း ကွန်တိန်နာကား ၅ စီးနဲ့ ပြန်ဝင်မယ်။ ဒါက စမ်းသပ်ကာလအနေနဲ့ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအောင်မြင်ရင် ကွန်တိန်နာအရေအတွက်ကို ဒီ့ထက် ထပ်တိုးပြီး အဝင်အထွက်လုပ်သွားမယ်။…
အတိုချုပ် ပြောရရင် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ကုန် သွယ်ရေးဖြစ်တဲ့ ကျင်စန်းကျော့ ဂိတ်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ ကွန်တိန်နာကားတပုံးက တန်ချိန်အားဖြင့် တန် ၅၀ ရှိပါတယ်။ ဆန်အိတ်အရေအတွက်ဆိုရင် 50 KG အလေး ချိန်ရှိတဲ့ အိတ် တစ်ထောင် ရှိပါတယ်။ ပေ ၄၀ အရှည်ရှိတဲ့ ကွန်တိန်နာပုံးအမျိုးအစားပါ” လို့ပြောပါတယ်။…
ဒီအခြေအနေအပေါ် မူဆယ်အခြေစိုက် မြန်မာကုန် သည်တဦးက “ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါပိုးကို ကားသမားကတဆင့်၊ ကုန်ကားတွေကတဆင့် ကူးစက်မှာ စိုးရိမ်တယ် ဆိုပြီးတော့ ကွန်တိန်နာစနစ်နဲ့လုပ်လိုက်တာပါ။ ကွန်တိန်နာစနစ်နဲ့လုပ်တော့ ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင် အဓိက ကုန်ကျစရိတ်တွေ ပိုများသွားတယ်။….
ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်တုန်းက ဆန်တအိတ်ကို ပို့မယ်ဆိုရင် တအိတ်ကို မြန်မာငွေ ကျပ် ၈၀၀ လောက်ပဲကျတယ်။ အခု ဒီစနစ်နဲ့ပို့မယ်ဆိုရင် မြန်မာငွေ ကျပ် ၁၆၀၀ လောက်ကျတယ်။ ဆိုတော့ ကုန်ကျရိတ်က အရင်ထက် နှစ်ဆဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က လောလောဆယ်မှာ ဂိတ်ပြန်ဖွင့်ရေးက အဓိကဆိုတော့ ဂိတ်ပြန်ဖွင့်ရေးကိုပဲ ဦးစားပေးလုပ်တာပေါ့ နော်။ ကွန်တိန်နာခတွေကိုလည်း ဈေးလျှော့ ချနိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားဖို့တော့ရှိပါတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။…
အခု ဂိတ်ကို ပြန်ဖွင့်မှာကို ကုန်သည်စီးပွားရေးသမားတွေအနေနဲ့ အများကြီးကြိုဆိုကြောင်းနဲ့ ကုန်သည်တွေကို မှီခိုနေရတဲ့ ကုန်စည်ကုန်ချ အလုပ်သမားတွေနဲ့ ကားသမားတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်း ဆက်လက်ပြောပါတယ်။လတ်တလောမှာတော့ မြန်မာပြည်ဘက်က ပို့ကုန်အနေနဲ့ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ပဲ ၊ နှံစား ပြောင်း ကုန်စည် ၄ မျိုးကို ဦးစားပေးပို့ဆောင်သွား မှာဖြစ်ပြီး ကွန်တိန်နာပုံး အရေအတွက်များလာပါက တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဆက်လက်တင်ပို့သွားဖို့ ရှိပါတယ်။…
နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ အခုလို ကွန်တိန်နာစနစ်သစ်နဲ့ ကုန်သွယ်မယ့်အစီအစဉ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်သာ အကျိုးအမြတ်ရှိနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့် ပြည်တွင်းစားသုံးသူနဲ့ စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအပေါ်မှာ ထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ မူဆယ်အခြေစိုက် ကုန်သည်တွေက ပြောပါတယ်။…
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကပို့ကုန်က လယ်ယာထွက်ကုန်နဲ့ သစ်သီးဝလံတွေ ဖြစ်လို့ တောင်သူအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်သလို ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့် သွင်းကုန်ဈေးနှုန်းတွေ လည်း မြင့်လာနိုင်တာကြောင့် ပြည်တွင်း စားသုံးသူတွေ အပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်က အဆို ပြုကုန်ကျစရိတ်အရ အဆို ပါစနစ်သစ်ဟာ ကျပ်သိန်း ၂၀ အထိ ကုန်ကျစရိတ်ရှိနိုင်ပြီး လတ်တလောမှာတော့ အဲဒီကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ပက်သက်လို့ နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိ သူ တွေ ညှိနှိုင်းဆဲလို့ သိရပါတယ်။…
“ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အဝင်မှာ ရှန်တိန်အဆင့်ဆင့်ရှိမယ်။ အဲတော့ ရှန်တိန်ခ အတွက်ကုန်ကျစရိတ် တွေရှိမယ်။ ကုန်ပစ္စည်း ပိုးသတ်ခ၊ ဆေးစစ်ခတွေရှိမယ်။ နော က်ထပ် ကွန်တင်နာ ငှားခ၊ကရိန်း အတင်၊အချခ ၊ကွန်တင်နာ တင်ကားခ တွေ ထပ်ပါတယ်။ အဲတော့ အစအဆုံး ကုန်ကျစရိတ် ကျပ် သိန်း၂၀ ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။ သွင်းကုန်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ”လို့ မူဆယ်အခြေစိုက်ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။…
ဒီစနစ်ကို ကျင်စန်းကျော့ဂိတ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်က တကြိမ် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ လာမယ့် ၂၆ ရက်မှာ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကုန်တိန်နာ ၅ လုံးကျစီနဲ့ ထပ်မံ စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ရာမှာဖြစ်ပြီး ဒီစမ်းသပ်မှု အောင်မြင်ရင် အဲဒီဂိတ်ကို ဆက်လက် ဖွင့်လှစ် သွားမှာပါ။ဒါ့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်ကစပြီး တရုတ်နိုင်ငံထဲကို တင်သွင်းမယ့် ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ တရုတ် သို့မဟုတ် တရုတ် အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့ ရေးထိုးထားဖို့နဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့လည်း GACC မှတ်ပုံတင်ကြဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။….
အခုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ့် ကျင်ဆန်းကျော့ဂိတ်က တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ မူဆယ်နဲ့ကျယ်ဂေါင်အကြားမှာ ရှိတဲ့ မာဝေးဂိတ်စခန်း ပြီးရင် ကုန်တင်ကားအစီးရေ ဒုတိယအများဆုံး အဝင်အထွက်ရှိတဲ့ ဂိတ်စခန်းတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားကူးသန်းဝန် ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေအရ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ မူဆယ်နယ်စပ်စခန်းမှတဆင့် ကုန်သွယ်မှုက အခုဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်အထိ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုက ဒေါ်လာ ၉၃ ဒသမ ၆ သန်း၊ သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုက ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၆ သန်းရှိပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဒေါ်လာ ၉၅ ဒသမ ၃ သန်းသာရှိပါတယ်။…
ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၂ဝဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်အထိ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုက ဒေါ်လာ ၄၉၂ သန်း၊ သွင်းကုန်တင် သွင်းမှုက ဒေါ်လာ ၁၆၉ ဒသမ ၂ သန်းရှိပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဒေါ်လာ ၆၆၁ ဒသမ ၂ သန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကာလတူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် လက်ရှိအခြေအနေမှာ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုက ဒေါ်လာ ၃၉၈ ဒသမ ၃ သန်းလျှော့ကျမှုရှိသလို သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုက ဒေါ်လာ ၁၆၇ ဒသမ ၆ သန်းလျှော့ကျမှုရှိတာကြောင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၅၆၅ ဒသမ ၉ သန်းလျှော့ကျမှုရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
Previous Previous post: ဟားခါးမြို့နယ်တွင် ဒီနှစ် ခရစ္စမတ်ပွဲတော် မကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်
Next Next post: ဒီကနေ့မှာမွန်မြတ်တဲ့အလှူ တစ်ခုပြုလုပ်ပြီး (၇)ရက်သားသမီးတွေအတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး